iseti yeemag Abavelisi | I-china imagi seti abaXhasi kunye neFektri
Imijelo yeswiti eyakhiweyo, i-400ml ye-mug bone china.
Umgubo we-china we-bone mug kunye nejezi enithiweyo ehambelana nayo imagi, ijezi enithiweyo inokuba ngawo nawuphi na umbala kunye noyilo. Ilungele lonke ixesha lonyaka, ngakumbi ixesha lokuwa kunye nobusika. Imag ibambe i-400ml (yamanzi eemug apheleleyo). Inkulu ngokwaneleyo ukuba usele yonke imihla okanye usele iti njl.njl. IBAKALA ELIPHAKAMILEYO: imagi yenziwa ngeprimiyamu ephezulu evunyiweyo yethambo china ukhuseleko lwakho noxolo lwengqondo, UKUKHOKHELA-SIMAHLA, OKUNGEKHO KWI-TOXIC, ukumelana ne-chip kwaye womelele kakhulu. UKUSETYENZISWA KUNYE NOKUQHELEKILEYO: Ngesiphatho seebhegi esihle, esikhulu ...
I-Glaze mug imagi ye-T yokuhombisa ezantsi zodongwe, i-400ml yemibala yemigca yombala wokukhazimla kombala, ukugqiba kwangaphandle komatshini kunye nokugqitywa okungaphakathi ngaphakathi. Ngenxalenye encinci esezantsi ngokuhombisa umbala odibeneyo wombala.
450ML Glaze mug kunye noyilo
Umbala we-glaze mug kunye noyilo lwe-silika, i-450ml imagi enombala we-glaze, imibala emibini eyahlukileyo engaphandle kwemug.
MUG NGESIKHUMBUZO soqalo
I-mug ethe nkqo ene-bamboo okanye isiciko somthi I-bone entsha ye-china, i-china entle, i-400ml imagi enesiciko se-bamboo, imagi ngaphandle kombala we-glaze kunye noyilo, inokudibana necephe, Uyilo lwePateni (Iseti ye-6 okanye ye-4) IBHONI ELITSHA CHINA MUG SET IBandakanya: Iigagasi ezine okanye ezi-6 ezinesiciko soqalo, imagi ibambe i-400ml (yamanzi agcweleyo) Inkulu ngokwaneleyo ukusela okanye iti yakho yemihla ngemihla njl. IBANGA ELIPHAKAMILEYO IBHOLA ELITSHA ETSHAYINA: Ikomityi yenzelwe ipremiyamu ephezulu evunyiweyo yethambo china ukukhusela kunye noxolo lwengqondo, UKUKHOKHELELA NGOKUKHULULEKILEYO, OKUNGEKHO KWI-TOXIC, chip-r ...
Imagi yoyilo lwezilwanyana, xuba kwaye utshatise izinto ezahlukeneyo kunye nemilo yeemugs, ezinje ngemfutshane emfutshane emile imilo emikhulu ngesiphatho sombala we-glaze kwitye lezinto, njengee-mugs zethambo china okanye izinto zamatye ezinombala omenyezelayo. Ingathathelwa ingqalelo njengeseti yesidlo sangokuhlwa, iseti yeti. Izinto zesipho, imagi yokusetyenziswa kwemihla ngemihla
Iiggs ezahlukeneyo ezinemilo nganye yemug efanelekileyo kunye nomdlalo woyilo, uyilo lweValentine entle nge-12oz bullet mug kwithambo china / kwithambo elitsha lasechina. Uyilo lweeleta zomthendeleko okanye umhla wokuzalwa nge-12oz bullet mug kwithambo lechina okanye kwithambo elitsha lasechina. Uyilo olukhethekileyo oludibeneyo lwe-9oz zsfk mug njl
Uthotho lwegadi yelizwe
Imug eneempuphu, ithambo elitsha le-china, ithambo entle ye-china mug, inokuqwalaselwa njengeseti yesidlo sangokuhlwa, iseti yeti, intyatyambo nebhabhathane, intaka njl.iqela legadi yelizwe. Izinto zesipho, imagi yokusetyenziswa kwemihla ngemihla
E-GLAZE UMHLAHLO WOKUYILA IZILWANYANA
I-T Shape mug, imagi yokubumba ephindiweyo, i-china yethambo elitsha ekwakhiweni kwesilwanyana se-glaze, inokuqwalaselwa njengeseti yesidlo sangokuhlwa, iseti yeti, inyamakazi yezilwanyana, indlovu, iqwarhashe, impungutye, ingwe, njl njl. Izinto zesipho, imagi yokusetyenziswa kwemihla ngemihla